Haddii Hab Suuqgeyntaada Uu Yahay Inaad Liiddo Badeecada Shirkadaha Kale Waad Guuldareysatay!
Marka laga hadlayo suuqgeynta, waa habka shirkadahu ay adeegsadaan si ay badeecadooda dadka u baraan sidoo kalena ay ku dhiirrogeliyaan in ay iibsadaan.
Waa halka inta ugu badan sababta in dakhliga shirkadda uu sare u kaco ama uu hoos u dhaco maadaama ay macaamiishu la falgasho.
Sidaa darteed shirkadaha soo koraya waxaa ay ku dadaalaan in aanay ku fashilmin hab suuqgeynta, waxeyna adeegsadaan habab kala duwan si ay ugu guuleystaan.
Nasiib darrose waxaa jira shirkado tiro badan oo yar yar iyo waaweyn isugu jira oo adeegsada hab suuqgeyneed qaldan iyagoo u-gafa ama liida badeecada shirkadaha suuqa kula jira iyagoo amaanaya badeecadooda.
Anshaxa ganacsiga waa ay ka reebantahay in aad aflagaadeysa badeeco ay leedahay shirkad suuqa kula jirta, balse waxaa su’aal ah haddii badeecada shirkaddaada ay ka tayo fiicantahay kuwa shirkadaha kale ee suuqa ku jira sideed bulshada ula wadaageysaa?
Xaaladaas oo kale marka ay taagantahay shirkadaha ku xeeldheer suuqgeynta waxey adeegsadaan habkan:
Kaliya waxa ay dadka la wadaagaan tayada badeecadeeda, waxaa kale oo ay sii raaciyaan waxa badeecadooda ay kaga duwantahay dhammaan badeecada shirkadaha kale ee suuqa yaalla. Marka qofka wax-iibsanaya uu maqlo waxa badeecada shirkadda ay kaga duwantahay kuwa kale waxuu bilaabayaa in uu baaritaan sameeyo, haddii uu ogaadana waxaa soo baxeyso in uu iibsado badeecada shirkadda ka duwan shirkadaha kale.
Habkaas ayaa ah midka ugu habboon ee aad dadka u sheegi karto fiicnaanta alaabtaada adigoon wax dhib ah u geysaneynin shirkadaha kale ee suuqa kugula jira.